कन्डम लगाएर सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ कि नलगाएर ? – PathivaraOnline
Home > मनोरञ्जन > कन्डम लगाएर सेक्स गर्दा मज्जा आउँछ कि नलगाएर ?
Bishal May 24, 2022 मनोरञ्जन 0
काठमाडौं । एचआइभी संक्रमणको मुल कारण हो– कण्डमको प्रयोग विना नै यौन सम्पर्क ।
नेपालका कूल संक्रमितमध्ये ७७ प्रतिशतमा यही कारण एचआईभी भएको पाइएको छ
डाक्टरको अनुसार कन्डम लगाएर सुरक्षित हुनको साथै यसले यौन सन्तुष्टि मापनी राम्रो प्रभाव पर्ने बताएका छन्। यसकारण सुरक्षित र रोमाञ्चक योन आनन्द लिनका लागि चिकित्सकहरुले कण्डमको प्रयोग गर्न सल्लाह दिएका छन्।।
नेपाली बजारमा वार्षिक तीन करोडभन्दा बढीको कण्डम खपत हुन्छ ।
एचआईभी /एड्स, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सीसहित यौनजन्य रोग रोक्ने भएकाले यौनसम्पर्कका बेला कण्डमको प्रयोग आवश्यक भएको चिकित्सक बताउँछन् ।
कण्डमको प्रयोगले अहिले बढिरहेको अनिच्छित गर्भ र गर्भपतन पनि रोक्न सहयोग पुग्छ ।
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रले एचआईभी बढ्नुको कारण कण्डमको प्रयोग न्यून हुनु रहेको जनाएको छ
।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****
पछिल्लो सर्वेक्षणमा 50 प्रतिशतभन्दा बढी पुरुषहरुलाई कन्डममा बिना नै सम्पर्क राम्रो लागेको बताएको छ तर डक्टरको अनुसार कण्डमः लगाउँन जति मज्जा आउछ त्यतिनै कण्डम लगाउँदा आउने गर्दछ अझ थप कन्डम लगाउँदा यौन रोगबाट पनि बचाउँन सक्ने र लिंगलाई योनीभित्र प्रवेश गर्न सहज हुने बताएका छन्।
यसकारण सम्पुर्ण पुरुषहरुलाई कण्डमको प्रयोग गरी मात्र यौनसम्पर्क गर्न अनुसन्धानकर्ताहरुले अनुरोध गरेका छन्।
नेपालमा कन्डमको आयात गर्दा कर छुट छ । कर छुट हुने भएकोले पनि नेपालमा गुणस्तरहीन कण्डम भित्रिने गरेको बिज्ञ बताउँछन् ।
नेपालमा पाइने कतिपय कण्डममा उत्पादन र म्याद सकिने मिति उल्लेख नगर्ने भएकाले गुणस्तरीयतामा विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
बजारमा यस्तो हल्ला छ कन्डम नलगाएर सेक्स गर्दा मज्जा आउने चर्चा छ ।तर बिज्ञहरुका अनुसार दुबै जना बिच राम्रो सम्बध भय कन्डम लगाएर गर्दा पनि यौन संतुष्ट मिल्ने बताएको छ।
आवश्यक मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने लुब्रिकेन्ट तथा अन्य पदार्थको मात्रा नमिलेको खण्डमा पनि कण्डम गुणस्तरहीन हुन्छ ।
तर, यस्तो मात्रा जाँच गर्ने निकाय नेपालमा छैन । आइवीवीएस सर्भेअनुसार एचआइभी तथा यौनरोग सर्न सक्ने जोखिममा रहेका यौनकर्मी, उनीहरूका ग्राहक, पुरुष समलिंगी, तेस्रो लिंगी, सुईबाट
लागुपदार्थ लिने व्यक्तिमा कन्डम प्रयोग गर्ने व्य
आमा भन्दा छोरी तरुनी देखिएपछि
म’हिलाहरु ४० लागेपछि यस का’रण जाग्छ फेरी बै’स